INetflix izokhuphula amanani ayo kumakhasimende amanje ngoSepthemba | Izindaba zamagajethi
Lezi zinyanga ezedlule siyazibona njengoba iNetflix iphakamisa izintengo zokubhaliselwe kwazo. Yize lokhu kukhuphuka kwentengo kuyinto ethinta abasebenzisi abasha kuphela, labo abenza i-akhawunti okokuqala ngqa. Yize kwakwaziwa ukuthi kwesinye isikhathi nalabo asebevele benayo i-akhawunti bazogcina bekuthola lokhu kukhuphuka. Kuzokwenzeka ngoSepthemba.
Inkampani isiqalile ukwazisa abasebenzisi nge-imeyili. Ukukhuphuka kwentengo okungathandeki kubasebenzisi abaningi abane-akhawunti ye-Netflix. Ngaphezu kwalokho, kuya ngohlelo olunikezwe inkontileka, ukwanda kwentengo kungahluka.
Uhlelo oluyisisekelo yilona kuphela oluhlala lungashintshi kulokhu, ngenani lama-euro angu-7,99 ngenyanga. Endabeni yohlelo olujwayelekile, iNetflix iphakamisa intengo yayo nge-euro eyodwa, ukuze ihlale kuma-euro angu-11,99 ngenyanga. Uhlelo lapho ukukhuphuka kubonakala kakhulu yiPrimiyamu, okwenzeka kubiza ama-euro angu-15,99 kuleli cala. Ukukhuphuka kwama-euro amabili ngentengo yayo.
Le nkampani isivele yamemezela osukwini lwayo lokho uzomemezela lokhu kukhuphuka ezinsukwini ezingama-30 ngaphambi kwesikhathi. Ngalo mqondo, isithembiso sayo sigcwalisekile, ngakho-ke abasebenzisi manje banesikhathi sokucabanga ukuthi bafuna ukuqhubeka nokusebenzisa i-akhawunti yabo noma bazokhansela okubhaliselwe ngenxa yalokhu kukhuphuka kwamanani entengo.
Ngo-2017 iNetflix yayivele inyusa amanani, ngesilinganiso esifanayo naleso abasenze manje. Ipulatifomu ibilokhu inyusa amazinga ayo emhlabeni wonke izinyanga ezimbalwa, njengendlela yokuthola imali engenayo yokukhiqiza uhlu lwayo olwandayo lwama-movie nama-movie. Yize ngemuva kokwehluleka okuthile bamemezele ukuthi bazokhiqiza amafilimu wesabelomali ambalwa.
Ongabuka ku-Netflix, Movistar + naku-HBO ngo-Agasti
Uma une-akhawunti yeNetflix, kungenzeka lokho usuvele uyitholile i-imeyili ukukwazisa ngokwenyuka kwentengo okuzayo okufika ngoSepthemba. Kwabanye abasebenzisi kuyinkimbinkimbi ngandlela thile, ngoba ngokuya ngohlelo, bazogcina bekhokha ama-euro angama-24 ngaphezulu ngonyaka, okungeyona into abayithanda kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » INetflix inyusa amanani wamakhasimende amadala aqala ngoSepthemba
Uyini umehluko phakathi kwe-5G NSA ne-5G SA
Izicelo zokugwema amakhamera wejubane